Col. Cabdullahi Cirro: Qof Walba Oo Reer Mudug Ah Qoriga Ha Xareeyo – Goobjoog News
Col. Cabdullahi Cirro oo ah taliyaha qeybta 21aad ee xoogga dalka ayaa ka hadlay sida ay u dhacday shaqaaqadii suuqa magaalada Galkacyo isaga oo sheegay in ay tahay arrin aan la fileyn oo dhacday.
“Iyada oo laga shaqeynayey muddo bil ah nabadda iyo bulshada inay is-fahamto qeybaheeda kala duwan ee Galkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug, wax aanaan fileyn ayaa ka dhacay suuqii weynaa ee magaalada Galkacyo ahna xarunta ganacsiga ugu ballaaran gobolkaan uu ka jiro “ isaga oo nasiib-darro ku tilmaamay arrintaasi.
Taliye Cirro ayaa dhinaca kale xusay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya cid kasto oo nabadda ka hortimaada ay la tiigsan doonaan sharciga, waxaa uuna fariin u jeediyey bulshada ku nool Kaalkacyo.
“Ciidanka dambiilaha ayuu soo qabtaa ama nabadda meesha laga waayo ayuu nabad ka dhaliyaa qofka la qabtana, waxaa la geyn doonaa sharciga u yaallo dalka oo ay ugu horreyso shareecada Islaamka in lamariyo, waxaan codsaneynaa qof walboo reer Mudug qoriga ha xareeyo qoriga nabadda ayuu dilaa ha labarto hanaanka sharciga loo maro iyo hanaanka loo dacwoodo”.
Akhriso: Bayaanka Hey'adda Culimada Soomaaliyeed